UTig Leaca Bān
Igumbi elinomnyango ophumela ngaphandle yonke sinombuki zindwendwe onguNoel
Indawo yokuhlala ezimeleyo enegumbi elinye lokulala kunye negumbi lokuhlambela eline-ensuite, indawo yokuhlala kunye neyokutya kunye nekhitshi eligcweleyo. I-wifi enenethiwekhi, kuquka nangaphandle. Indawo yokuhlala yangaphandle efihlakeleyo. Indawo yokupaka yasimahla kunye neebhayisekile ezimbini zibandakanyiwe kwisiza. Ibhedi yohambo kunye nesitulo esiphezulu siyafumaneka xa uceliwe.
Ngokuthe ngqo ukunqumla u-N72, iindwendwe zinokufikelela kwiNdlela kaFossa – indlela yokuhamba / yokuhamba ngebhayisekile- ukuya kumbindi wedolophu yaseKillarney (malunga neekhilomitha ezi-4 okanye iimayile ezi-2.5) kwaye zibe nokufikelela ngokuthe ngqo kwiPaki yeSizwe yaseKillarney.
Ubutofotofo behotele kunye nobutofotofo bekhaya.
Akukho zinkcukacha zingahoywayo kule ndawo ikhethekileyo kunye nolungiselelo. Abanini badale le ndawo iyilwe kakuhle becinga ngawe. Iisepha zengingqi, iincwadi zesikhokelo, iimephu kunye neengcebiso zokuqinisekisa ukuba uhambo lwakho oluya eKillarney luya kuba ngamava omele uwakhumbule.
I-GPS ilungelelanisa i-Latitude: 52.072447 | Ubude: -9.561051.
5.0 · Izimvo eziyi-237
Sikwi N72 aka iRing of Kerry. Ezinye iindawo zomdla ezikufutshane ziquka:
-Killarney Golf & Fishing Club
- Umsantsa weDunloe
ICarrauntoohil (eyona ncopho iphakamileyo yaseIreland)
- Ingxangxasi yeTorc
-Muckross House & Gardens
- Amachibi aseKillarney
Abanini kwisiza imibuzo kunye noncedo. Sigubungela amacala omabini eAtlantiki kunye neKillarney yasekhaya kunye neTexan.